Shirkad Turkey ah oo bilowday dhismaha wadada Muqdisho iyo Afgooye | Sagal Radio Services
Dhismaha wadadan ayaa waxaa maalgelinaysa dowlada Turkiga waxaana lagu arkayay saaka agagaarka koontaroolkii hore ee Afgooye howlo laga burburin ah oo wadada laamiga ah la burburinayo.
Waxaa la xiray saaka qeybo ka mid ah wadada isku xirta magaalada Muqdisho iyo Afgooye iyadoo gaadiidka ay marayeen waddo wareeg ah. Gaadiidleyda ayaa soo dhoweeyay dhismaha wadadan oo la sugayay muddo dheer.
Sidoo waxaa lagu wadaa in la bilaabo dhismaha wadada isku xirta magaalada Muqdisho iyo Jowhar. Dhismaha wadada Muqdisho iyo Afgooye ayaa la bilaabay kadib markii dhowaan uu ku soo xirtay dekeda Muqdisho markab sida gaadiidka lagu dhiso wadooyinka.
Ra’isalwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo Wafdi ka socday dowladda Qadar oo ay wehliyeen Madaxweynayaasha Hirshabeelle iyo Koofur Galbeed ayaa dhagax dhigey dhismaha Waddooyinkan 18kii Februay sanadkan inkasta oo tan iyo xilligaas aan la bilaaban.
Mashruucan dhismayaasha Waddooyinka Muqdisho iyo Afgooye iyo Muqdisho iyo Jowhar ayaa waxaa ku baxaya $200Milyan oo doollarka Mareykanka ah.